ढाँचा - गोलिचिन्हहरू र क्रमाङ्कनरोज्नुहोस। विकल्प ट्याव पृष्ठ खोल्नुहोस
तपाईँले परिमार्जन गर्न चाहेको स्तर(हरू) चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको ढाँचा निर्दिष्ट गर्नुहोस्
तपाईँले ढाँचा विकल्पका लागि परिभाषित गर्न चाहेको स्तर(हरू) चयन गर्नुहोस्चयन गरिएको स्तर पूर्वावलोकनमा हाइलाइट गरिएको छ ।
चयन गरिएको स्तरहरूका लागि एउटा क्रमाङ्कन शैली चयन गर्नुहोस् ।
१, २, ३, ...
रोमन अंकहरू (ठुलाअक्षर)
रोमन अंकहरू (सानाअक्षर)
ठुलाअक्षर अक्षरहरू सहित बर्णानुक्रम क्रमाङ्कन
सानाअक्षर अक्षरहरू सहित बर्णानुक्रम क्रमाङ्कन
एउटा गोली चिन्ह सुरुको एउटा रेखामा थप्छ । यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि गोलि शैली रोज्न क्यारेकटरबटन क्लिकुहोस् गर्नुहोस् ।
हालको रेखा लम्बाइमा ठीक पार्न गोलीचिन्हहरू पुन: साइज गरिन्छ । यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले एउटा क्यारेक्टर शैली परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ जसले गोलीचिन्हहरूका लागि एउटा भिन्न फन्ट साइज प्रयोग गर्दछ ।
गोली चिन्हका लागि एउटा छविचित्र प्रदर्शन गर्छ । यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको छविचित्र फाइल स्थापना गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
लिङ्क भएको ग्राफिक्स
गोली चिन्हका लागि एउटा छविचित्र प्रदर्शन गर्छ। यो विकल्प चयन गर्नुहोस् र त्यसपछि चयन गर्नुहोस् तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको छविचित्र फाइल स्थापना गर्न क्लिक गर्नुहोस् ।
एउटा क्रमाङकन शैली लागू गर्दैन ।
निम्न फाँटहरूको उपलब्धता शैलीमा निर्भर गर्दछ जुन तपाईँले क्रमाङकन बाकसमा चयन गर्नुहुन्छ ।
सूचीमा सङ्ख्याको अगाडि प्रदर्शन गर्न एउटा क्यारेक्टर वा पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
सूचीमा सङ्ख्याको पछाडि प्रदर्शन गर्न एउटा क्यारेक्टर वा पाठ प्रविष्ट गर्नुहोस् यदि तपाईँले शैली "1.)" प्रयोग गर्ने एउटा क्रमांकित सूची सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो बाकसमा ".)" प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
मा सुरु गर्नुहोस्
हालको स्तरका लागि एउटा नयाँ सुरु सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
सापेक्षिक साइज सापेक्षिक साइज
विशेष क्यारेक्टरहरू संवाद खोल्दछ, जहाँ तपाईँले एउटा गोलीचिन्ह प्रतीक चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।
ग्राफिक्सका लागि विकल्प:
ग्राफिक चयन गर्नुहोस् वा तपाईँले एउटा गोलीचिन्हको रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको ग्राफिक फाइल स्थित गर्नुहोस् ।
ग्राफिकका लागि एउटा चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
ग्राफिकका लागि एउटा उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
अनुपात जारी राख्नुहोस्
ग्राफिकको साइज अनुपातहरू व्यवस्थित गर्दछ ।
ग्राफिकका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प चयन गर्नुहोस् ।
सबै स्तरहरूका लागि क्रमाङकन विकल्प सेट गर्दछ ।